Ahiana hanimba ny asan’ny vondrom-piraisamonina sivily ny tolo-dalàna momba ny FTMF ao Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Milaza ny iraka manokan'ny Firenena Mikambana fa hanilika ny firaisamonim-pirenena ny volavolan-dalàna
Voadika ny 15 Avrily 2021 4:17 GMT
vondrom-piarahamonina sivily sy mpanandra-teny ara-tontolo iainana manatontosa hetsi-panoherana ao Thailandy. Sary avy amin'ny pejy Facebook an'i Prachatai, mpiara-miombona ara-botoaty amin'i Global Voices.
Nandrafitra tolo-dalàna momba ny fikambanana tsy miankina amin'ny governemanta (ONG na FTMF) ny governemanta thailandey, tolo-dalàna melohin'ny vondrona mpandala ny zon'olombelona satria ahitana tahiry izay mety ahafahana manohintohina ireo mpikatroka sy mpitarika vondrom-piraisamonina sivily.
Ny Biraon'ny Vaomieram-Panjakana no namoaka lalàna drafitra momba ny fiasan'ny fikambanana tsy mitady tombombarotra tamin'ny volana febroary, ary nanatontosa fakan-kevitra tamin'ny vahoaka tanelanelan'ny 12 ka hatramin'ny 31 marsa.
Raha lany ity lalàna ity, dia takiana ny FTMF hisoratra anarana indray araka ny taridalàna nosoritan'ny governemanta.
Araka ny mpitondratenin'ny governemanta Ratchada Thanadirek, miisa 87 ny FTMF voasoratra anarana ao amin'ny firenena, maro amin'ireo no milaza fa tsy mitady tombontsia saingy voatohana ara-bola sady tsy miasa ho amin'ny tombontsoam-bahoaka. Nolazainy fa raha lany ny lalàna vaovao dia hiantoka ny mangarahara.
Tsy natao hamerana ny zony izany, fa nokendrena hiantohana fa ny vola raisin-dry zareo dia ho ampiasaina araka ny tokony ho izy ary ny asan-dry zareo dia hotarihana hifanaraka amin'ny tanjon'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa, ho amin'ny tombontsoa tena izy.
Hatramin'ny taona 2020, nokarakaraina nanerana an'i Thailandy ny hetsika goavana fanoherana miantso ny hisian'ny fanavaozana amin'ny fitondram-panjakatokana sy ny lalampanorenana narafitry ny miaramila. Ho setrin'izany, nilaza ny manampahefana fa misy amin'ireny hetsika ireny no tohanan'ny vondrona manana famatsiana avy any ivelany.
Namoaka fanambarana tamin'ny 26 marsa ny iraka manokana avy amin'ny Firenena Mikambana miisa telo izay naneho ny ahiahiny amin'ny tahiry sasantsany amin'ny volavolan-dalàna. Ohatra, ny fizarana voaloahany dia mametraka fa ny tanjon'ny drafi-dalàna dia ny “hifehezana ny fiasan'ny fikambanana tsy mitady tombombarotra eto amin'ny Fanjakana mba hiantohana ny fananana, ny fitondran-tena, ny fisokafana, ny fangaraharana ary ny tena fiasana tokoa ho amin'ny vahoaka sy ny tombontsoam-pirenena tsy misy teti-panorona miafina sy hosoka.” Nampitandrina ny Iraka manokan'ny Firenena Mikambana fa “mety ho ampiasaina ara-tondromolotra hamerana ny asan'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa sy ny mpiaro ny zon'olombelona” ny tahirin-dalàna.
Azo sainina fa tsy ampy ny fankatoavan'ny manampahefana ny fahaizana manokana sy ny fanohanana atolotr'ireo fikambanana ireo, ary heveriny ho mety ho fandrahonana ny fiaraha-monina azy ireny. Mino izahay fa manilika ny firaisamonim-pirenena ny tahirin-dalàna tahaka izany.
Vondrom-piraisamonim-pirenena maro no namoaka fanambaràna iraisana mitsikera ilay volavolan-dalàna. Nanamarika tanaty ahiahy ry zareo fa malalaka loatra ny famaritana ny FTMF iray ao amin'ny volavolan-dalàna, ahafahana misahana izay vondrona na fikambanana rehetra sy manery azy ireo hisoratra anarana sy hiditra ao amin'ny takian'ny lalàna feno fanerena.
Ny voambolana malalaka ao amin'ny volavolan-dalàna dia ahafahana manao fikarakarana tsy mitovy amin'ireo vondrona niangarana sasantsasany sy hitondra voka-dratsiny mafy amin'ireo fikambanana mitsikera ny governemanta, ka tsy ahafahana loatra mihaika ny fanapahan-kevitry ny governemanta.
Tsy eken-dry zareo ny fizaràna fah-6 amin'ny volavolan-dalàna, izay mamela ny manampahefana hiditra ao amin'ny biraon'ny fikambanam-piraisamonim-pirenena ka hanao dika mitovy amin'ireo lahatahirim-pifandraisana elektronika, tsy mila fampilazana mialoha na didy avy amin'ny fitsarana. Nasongadin-dry zareo ihany koa ny sazy henjana amin'ny fanitsakitsahana ny lalàna – famonjana hatramin'ny dimy taona, sy fandoavana onitra hatramin'ny 100,000 THB (manodidina ny 3.200 USD), na izy roa mitambatra.
Piroj Paraphet, mpanolo-tsaina avy ao amin'ny Union for Civil Liberty, niteny tamin'ny Thai Enquirer momba ny fiantraikany ratsy sy mafy avy amin'ny volavolan-dalàna amin'ny vondrom-piarahamonina FTMF.
Mety hanakana asa maro tsy tambo isaina hahazoan'ny fiarahamonina tombontsoa izany, nefa mihoa-pampana ny fanasaziana.
Hanana fahefana hifehy ny asan'ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra ny manampahefam-panjakana, [hofeheziny] ny fomba fandraisany fanohanana ara-bola vahiny ary horaketina izany ka rehefa tsy manaraka ireny fepetra ireny ry zareo dia hotsaraina ho toy ny jiolahy.
Sappasit Khumprapan, mpitarika ny Orina Mpanasoa Foibe Hiarovana ny Zon'ny Kilonga, nilaza fa hafa noho ny tamin'ny niaingany voalohany ny endrika hita amin'izao fotoana izao amin'ny volavolan-dalàna izay “kavanana tanteraka [mpandala ny mahazatra]”.
Namoaka matoandahatsoratra ny Bangkok Post izay miampanga ireo singa sasantsasany tamin'ny nandrafetan'ny governemanta ny lalàna mba hanindriana ireo hery mpanohitra, indrindra ireo miantsoantso hisian'ny fanavaozana ara-dalàna sy demaokratika.
Mahamenatra raha governemanta voafidim-bahoaka no hamoaka volavolan-dalàna mampiady hevitra tahaka izao.
Ao anatin'ny fampisaraham-bazana, miezaka manaratsy FTMF vitsivitsy ny fanjakana sy vondrona havanana mpitrifana sasantsasany amin'ny filazana fa mandray vola avy any ivelany. Avahan-dry zareo ireo manara-maso akaiky ny tsi-rariny ataon'ny fanjakana sy ireo raharaha idiran'ny fizarana faha-112 amin'ny fehezan-dalàna famaizana (na ny lalànan'ny lese majeste), ary ireo mitondra fanitsiana, manondro azy ireo ho mankahala firenena.
Izany hetsika izany no manamarina ny tahotra fa te-hanapaka ny elatry ny sampana sivika tsy te-hanaiky ireo lalàna sy fampiharan-dalàna tsy ara-drariny ny volavolan-dalàna. Raha mampihatra ny fitantanana tsara izy ity, dia tsy misy ny tokony hiahiahiana ary tsy tokony ho ampiasaina amin'ny fomba mampisalasala ny lalàna
Mbola handinika ny volavolan-dalàna ny kabinetra amin'ity volana ity mialoha ny hanolorana azy amin'ny parlemanta.